Intambo yefayibha yentsimbi yentsimbi yenziwa sisiseko sefayibha embindini wentambo yocingo lwentsimbi. Imelwe yi-FC. Xa kuthelekiswa nentambo yesinyithi yentsimbi, intambo yentsimbi yocingo lwentsimbi ineempawu zokuthamba, ukumelana nokubola kunye nokugcinwa kweoyile ngakumbi. Zimbini iintlobo zefibre engundoqo
Intambo ye-Stainless Wire 2
Intambo yocingo lwentsimbi engenasici isebenzisa umgangatho ophezulu we-AISI304, i-AISI316 njengezinto ezingenanto ezenziwe ngentsimbi. It has nokumelana ezibalaseleyo umhlwa, ukumelana lobushushu eliphezulu kunye nokumelana eliphantsi lobushushu.
Intambo yentsimbi ebunjiweyo yenziwa ngeentambo zentsimbi ezithi nkxu kwitanki enezinki ezinyibilikisiweyo ukuze zenze umaleko otyebileyo wetywina le-zinc ngaphambi kokuba ucingo ludwebe. Ke ezi ngcingo zenziwe ngesinyithi zitsaliwe ukunciphisa ububanzi kwaye zonyusa ukuqina.
Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi okwangoku yeyona ntlobo isetyenziswa ngokubanzi yeplastiki evaliweyo yentsimbi. Iyathandwa ngabathengi ngexabiso eliphantsi kakhulu kunye nomgangatho olungileyo.
Intambo yocingo yenziwe ngumtya wentambo embindini. Imelwe ngoonobumba IWS okanye IWR. Intambo yentsimbi yocingo lwentambo enobubanzi obufanayo inamandla amakhulu okuqhekeka kunentambo yocingo eyintloko ye-hemp kwaye ithwala umthwalo omkhulu.
Okwangoku, ezona ntambo zimbini zisetyenzisiweyo zeplastikhi zitywinwe zintambo zentsimbi zezi: Igama elipheleleyo le-PU yi-polyurethane. Xa kuthelekiswa ne-PVC camera intambo yocingo lwentsimbi, ine-oyile elungileyo yokumelana, ukuqina, ukumelana ne-abrasion, ukumelana nokuguga kunye nokubambelela;
Camera Camera Intambo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi,